Properties for Sale in South Okkalapa - Yangon Region | iMyanmarHouse.com
3000 Lakhs and above Properties for Sale in South Okkalapa
Properties for Sale in South Okkalapa
Ad Number S-10032957
🔷 မြေအကျယ်-25×55 🔷 ဂိုဒေါင်အကျယ်-20×55 🔷...
Ad Number S-10031137
Landed House, complete with indoor swimming pool, available for sale at Cherry Garden Housing
3RC Area-30'x60' ဂရန်အမည်ပေါက်ပါ5Master Bedroom6Aircons Swimming Po...
Ad Number S-10023752
တောင်ဥက္ကလာ ၄ရပ်ကွက် ပြင်ဆင်ပြီး အသင့်နေ လုံးခြင်း ရောင်း
Ad Number S-10019718
Ad Number S-10016717
Ad Number S-9989606
🇲🇲🏠 တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ဗြဟ္မစိုရ်လမ်းမပေါ်တွင် ဈေးနှုန်းတန်...
Ad Number S-10032762
🇲🇲🏠 တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ရတနာလမ်းမပေါ်တွင် ဈေးနှုန်းတန် လုံးချင်းမြေကွက်လေး...
Ad Number S-10032752
🇲🇲🏠 တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် သံသုမာလမ်းမပေါ်တွင် လုံးချင်းအိမ်လေးတစ်လုံး ရောင်းမည်။ 🇲🇲🏠
Ad Number S-10032731
4,100 Lakh (Kyats)
Ad Number S-10032428
🔶 နေရာကောင်း ****တောင်ဥက္ကလာပ ဗြမ္ဘစိုရ်လမ်း ပေ ၂၀ x ပေ ၆၀ နေရာကောင်းရောင်း 🔶
Ad Number S-10032197
🔶 နေရာကောင်း ****သုမင်္ဂလာလမ်းမတန်း နန္ဒဝန်စျေးရှေ့ ပေ ၄၀ x ပေ ၆၀ အရောင်း 🔶
Ad Number S-10032148
Ad Number S-10031453
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရတနာလမ်းတွင် ရောင်းရန်ရှိသည်။
Ad Number S-10030113